Amnesty oo kahor timid go'aanka DF ay ku xirayso Baraha Bulshada
NAIROBI - Hay'adda Xuquuqda Aadanaha ee Amnesty International ayaa kahor timid go'aankii Wasiirka Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya, C/llaahi Goodax ee lagu xirayo Baraha Bulshada [Social Media].
Agaasimaha Amnesty ee Bariga Africa, Seif Magango ayaa wax lagu xumaado ku tilmaamay tallaabadan bulshada ku dhawan gudaha Soomaaliya looga xirayo baraha ay ku xiriiraan ee Internet-ka.
"Waa wax aad looga xumaado in dowladda ay ku fekerayso inay xirto xiriirka baraha bulshada gebi ahaan dalka oo dhan kadib markii ay ku guuldareysatay waajibka ka saaran inay ilaaliso xogta imtixaanada," ayuu yiri Seif Magango.
Seif Magango ayaa ugu baqay dowladda Soomaaliya inay sameyso tallaabooyin kale oo ay ku ilaalinayo imtixaanka xogtiisa, iyadoo aan ku dhaqaaqin fal caburin ah oo dadweynaha looga hor istaagayo xaqa ay u leeyihiin inay xog helaan, islamarkaana fekerkooda ku cabiraan.
"Imtixaan ayaa la xadayaa ma ahan wax loogu cudur-daari karo in la xiro baraha bulshada, oo bulshada laga hor-istaago xaqa ay u leeyihiin inay macluumaad helaan iyo xoriyadda hadalka," ayay Amnesty u sheegtay dowladda.
Hadalka Amnesty ayaa yimid kadib markii Wasiir Goodax uu sheegay in mudo 5 maalmood ah la xiri doono baraha bulshada [27-ka illaa 31-ka May], si looga hortago in la xado imtixaanada mideysan.
Amnesty ayaa go'aankan ku tilmaantay mid dhaawacayo xeerarka xuquuqul insaanka.
Kenya oo laga codsaday in ay Janan u gacan-geliso DF Soomaaliya
Soomaliya 03.02.2020. 18:00
Wasiirka Amniga Jubaland ayaa howlo caafimaad u jooga magaaladda Nairobi.
Tirokoob lagu sameeyay "rayidka uu Mareykanka ku dilay Soomaaliya"
Soomaliya 21.09.2019. 09:47
Sean Parker oo Sheegey Waxyeelada Facbook U Leeyahay Bini'aadanka
Caalamka 09.11.2017. 19:58
Amnesty: Dagaalka daahsoon ee Mareykanka ka wado Soomaaliya
Soomaliya 11.07.2019. 06:14